च्याम्पियन्स लिग : लिभरपुलविरूद्ध रियल मड्रिड र म्यानचेस्टर सिटीविरूद्ध डर्टमण्ड भिड्दै
नेपाली पब्लिक मंगलबार, चैत २४, २०७७
युइएफए च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनल खेलहरु मंगलबार रातिबाट शुरु हुँदैछन्। मंगलबार राति क्वाटरफाइनलको पहिलो लेगमा २ खेलहरु हुनेछन्।
पहिलो खेलमा रियल मड्रिड र लिभरपुलबीच महाभिडन्त हुँदैछ। अन्तिम १६ को खेलमा आरबी लेइपजिगलाई पन्छाउँदै लिभरपुलले अन्तिम ८ मा स्थान बनाएको थियो। त्यस्तै, रियल मड्रिड एटलान्टालाई स्तब्ध पार्दै अन्तिम ८ मा पुगेको थियो। खेल रियल मड्रिडको घरेलु मैदानमा नेपाली समयअनुसार मंगलबार राति १२ः४५ बजे शुरु हुनेछ।
२०१८ फाइनलपछि च्याम्पियन्स लिगमा यी दुई टोलीको भेट हुन लागेको हो। उक्त फाइनल खेल रियलले ३–१ गोलले जितेको थियो। रियलविरुद्ध लिभरपुलले च्याम्पियन्स लिगको पछिल्ला ३ खेलमा हार बेहोरेको छ। सबैखाले प्रतियोगितामा यी दुई टोलीले ६ खेलमा एकअर्काविरुद्ध खेलेका छन्। दुबै टोलीले ३–३ खेल जितेका छन्।
त्यसैगरी, दोस्रो खेलमा म्यानचेस्टर सिटी र बोरुसिया डर्टमण्ड आमनेसामने हुँदैछन्। अन्तिम १६ को खेलमा सिटीले मोन्चेङ्ग्लाबाचलाई पाखा लगाउँदै क्वाटरफाइनलमा स्थान बनाएको थियो। डर्टमण्डले प्रि–क्वाटरफाइनलमा सेभियालाई पन्छाउँदै अन्तिम ८ मा स्थान बनाएको थियो। खेल म्यानचेस्टर सिटीको घरेलु मैदानमा नेपाली समयअनुसार राति १२ः४५ बजे शुरु हुनेछ।
च्याम्पियन्स लिग २०१२–१३ को समूह चरणमा सिटी र डर्टमण्डको भेट भएको थियो। उक्त समयमा एक खेल बराबरीमा सकिएको थियो। एक खेलमा डर्टमण्ड विजयी भएको थियो।
म्यानचेस्टर सिटीले च्याम्पियन्स लिगमा जर्मन टोलीविरुद्ध पछिल्ला ११ खेलमध्ये १० खेलमा जीत निकालेको छ। र, समग्रमा जर्मन टोलीविरुद्ध १२ खेलमा विजयी भएको छ।
डर्टमण्ड समूह चरणको खेलमा लाजियोसँग हार बेहोरेपछि लगातार सात खेलमा हारेको छैन। पेप ग्वार्डीओलाको प्रशिक्षणमा म्यानचेस्टर सिटीले च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइलनमा आफ्नो ५ मध्ये ४ खेलमा हार बेहोरेको छ। २०१६–१७ पछि डर्टमण्ड क्वाटरफाइनलमा पुगेको हो।
म्यानचेस्टर सिटी र डर्टमण्डले हालसम्म ४ खेलमा एकअर्काको सामना गरेका छन्। तीमध्ये २ खेल बराबरीमा सकिएको छ। २ खेलमा डर्टमण्ड विजयी भएको छ।
#लिभरपुल #रियल_मड्रिड #च्याम्पियन्स_लिग #म्यानचेस्टर_सिटी #डर्टमण्ड
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २४, २०७७ १४:०१
बुधबार, साउन २०, २०७८ ०६:५७ तपाईंको आजः कुन राशिलाई राम्रो ? कुन राशिलाई नराम्रो ?
मंगलबार, साउन १९, २०७८ २१:३८ बङ्गलादेशमा थप पाँच दिनका लागि लकडाउन बिस्तार
मंगलबार, साउन १९, २०७८ १९:२१ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको परीक्षा अनिश्चित
मंगलबार, साउन १९, २०७८ १८:३७ नेप्से हालसम्मकै शीर्ष स्थानमा, बजार पूँजीकरण ४३ खर्ब ४२ अर्ब